မြန်မာပုလဲနဲ့ သစ်လုပ်ငန်း ဗြိတိန် ထပ်တိုးအရေးယူ
This photo taken December 30, 2010 shows timbers of Teak precious wood near Thazi, central Myanmar. Timber, including teak and hardwood is one of Myanmar principal exports and the country's Teak is considered as one of the best quality in the world. AFP
စစ်ကောင်စီ အပါအ၀င် သူတို့နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအပေါ် ဗြိတိန်အစိုးရက ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ထပ်တိုးပြီး ချမှတ်လိုက်ကြောင်း တနင်္လာနေ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအတွက် အဓိက ၀င်ငွေရစေတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေထဲက မြန်မာ သစ်လုပ်ငန်းနဲ့ ပုလဲလုပ်ငန်း တွေကို ဗြိတိန်က ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ကြောင်း အဲဒီကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းတွေရဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို စစ်ကောင်စီက ရရှိနေတဲ့အတွက် ပစ်မှတ်ထား အရေးယူရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dominic Rabb ကလည်း- မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို ဗြိတိန်ရဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး တရားမ၀င်အစိုးရရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ပစ်မှတ်ထား လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ် လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စကို သုံးသပ်ခဲ့ကြောင်းလည်း Dominic Rabb ရဲ့ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီသုံးသပ်ချက် ရလာဒ်အနေနဲ့ ဗြိတိန်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးရေးနဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး စတာတွေအတွက် အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ဆက်လက်ရှိနေပေမဲ့ စစ်အုပ်စုကို အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် ကိစ္စရပ်တွေကို ရှောင်ရှားပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို စဉ်းစားချင့်ချိန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
စဈကောငျစီ အပါအဝငျ သူတို့နဲ့ ဆကျစပျနတေဲ့ ကုမ်ပဏီတှအေပျေါ ဗွိတိနျအစိုးရက ပိတျဆို့ဒဏျခတျမှုတှေ ထပျတိုးပွီး ခမြှတျလိုကျကွောငျး တနင်ျလာနကေ့ ကွညောခကျြထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
အာဏာသိမျးစဈအုပျစုအတှကျ အဓိက ဝငျငှရေစတေဲ့ လမျးကွောငျးတှထေဲက မွနျမာ သဈလုပျငနျးနဲ့ ပုလဲလုပျငနျး တှကေို ဗွိတိနျက ပိတျဆို့အရေးယူလိုကျကွောငျး အဲဒီကွညောခကျြမှာ ဖျေါပွထားပါတယျ။
ဒီလုပျငနျးတှရေဲ့ အကြိုးအမွတျတှကေို စဈကောငျစီက ရရှိနတေဲ့အတှကျ ပဈမှတျထား အရေးယူရတာဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဗွိတိနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Dominic Rabb ကလညျး- မွနျမာစဈအုပျစုနဲ့ ဆကျစပျနတေဲ့ ကုမ်ပဏီတှကေို ဗွိတိနျရဲ့ မဟာမိတျနိုငျငံတှနေဲ့အတူ ဒဏျခတျပိတျဆို့မှုတှကေို ခမြှတျဆောငျရှကျသှားမှာဖွဈပွီး တရားမဝငျအစိုးရရဲ့ ဘဏ်ဍာရေးလုပျငနျးတှကေိုလညျး ပဈမှတျထား လုပျဆောငျသှားမှာဖွဈတယျ လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဗွိတိနျနိုငျငံအနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ကုနျသှယျရေးကိစ်စကို သုံးသပျခဲ့ကွောငျးလညျး Dominic Rabb ရဲ့ကွညောခကျြမှာ ဖျေါပွထားပါတယျ။
အဲဒီသုံးသပျခကျြ ရလာဒျအနနေဲ့ ဗွိတိနျက ရငျးနှီးမွှုပျနှံတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှဟော မွနျမာနိုငျငံမှာ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးဖနျတီးရေးနဲ့ ဆငျးရဲနှမျးပါးမှု လြှော့ခရြေး စတာတှအေတှကျ အရေးပါတဲ့ အခနျးကဏ်ဍမှာ ဆကျလကျရှိနပေမေဲ့ စဈအုပျစုကို အမှုမဲ့ အမှတျမဲ့ အထောကျအပံ့ဖွဈစမေယျ့ ကိစ်စရပျတှကေို ရှောငျရှားပွီး လုပျငနျးဆောငျတာတှကေို စဉျးစားခငျြ့ခြိနျဆောငျရှကျသှားမှာဖွဈတယျလို့ ဖျေါပွထားပါတယျ။